Saafi Films - News: (DAAWO SAWIRO) Baabuur layaab leh Nuuciisana aan horey loo arag kana sameesan Ulwaaxyo oo lasoo saaray
(DAAWO SAWIRO) Baabuur layaab leh Nuuciisana aan horey loo arag kana sameesan Ulwaaxyo oo lasoo saaray
Le Nguyen Khang oo ah nin u dhashay Dalka Fiyatnaam (Vietnam) ayaa soo saaray gaari lala yaabay oo ka sameesan alwaax.
Ninkaan oo ka shaqeeya shirkad soo saarto alaabada laga farsameeyo alwaaaxyada ayaa farsameeyay gaarikan ka dib marki mid ka mid macamiisha ku xiran shirkadaas oo ah nin u dhashay dadlka Ingiriiska uu si kaftam ah u yiri ii farsamee baabuur ka sameesan alwaaax.
Le ayaa malintaas ka dib wuxuu bilaabay farsameenta baabuurikan oo ay ku qaadatay howshiisa ilaa 16 bilood .
Baaburkan ayaa la mid ah socodka baaburta caadiga ah isagoo sacadiiba jari kara ama soconayaba ilaa lixdan kiilo mitir saacadiiba (60 km/h).
Marki ugu horeesay ayaa lagu soo bandhigay gaarrigan maagalo ku taalo dalka Fiyatnaaam ayaa goobtii lagu soo bandhigayay waxa iskugu soo aruuray saxafiyiin iyo dadweyne doonayay in ay sawiro ka qaataan qaarkoodna rabeen in ay isku sawiraaan.
Baaburkaan ayaa waxa uu qaadi karaa kaliya oona saarana matoor la mid ah kan saaran gaariyada loogu jecel yahay caalamka ee BMW.
Le Nguyen Khang ayaa hada wuxuu ka nasan la'yahay dadka iyo ganacsatada sida joogtada ah u soo booqanaya baabuurkiisa kuwaas oo qaarkood rabaan in ay iibsadaaan baaburkaan oo ilaa iyo hada qiimihiisu marayo ilaaa $24,000.
samira on October 28 2012 ·
4,549,357 unique visits